သားသားမီးမီးတို့ကို စက္ကူရုပ်လေးတွေ ခေါက်ဖို့ အားပေးပါ - Hello Sayarwon
သားသားမီးမီးတို့ကို စက္ကူရုပ်လေးတွေ ခေါက်ဖို့ အားပေးပါ
Origami လို့ ခေါ်တဲ့ စက္ကူရုပ်လေးတွေ ခေါက်တာက စိတ်အပန်းပြေသလို သားသားမီးမီးတို့ကိုလည်း ပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။ အရုပ်လေးတွေ ခေါက်ပြီး ဆော့ရတာက ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ကစားနည်းတစ်ရပ်ပါ။
အရင်ကတော့ အရုပ်ခေါက်တာကို လူကြီးတွေက လုပ်ကြပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သားသားမီးမီးတို့ကို သင်ကြားမှုတွေမှာပါ ထည့်သွင်းလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီစက္ကူခေါက်တာလေးတွေက သားသားမီးမီးတို့အတွက် ကောင်းကျိုးရှိလား ဘယ်လို ကောင်းကျိုးတွေ ရှိနိုင်တာလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးတွေက ဘယ်အရွယ်ဆို အရုပ်စခေါက်လို့ ရပြီလဲ …….
သားသားမီးမီးလေးတွေက ၂ နှစ်ပြည့်ပြီ ပြောတာကို လိုက်လုပ်တတ်ပြီ။ လက်ချောင်းလေးတွေကို သေချာ လှုပ်ရှားတတ်ပြီဆိုရင်တော့ သားသားမီးမီးတို့ကို အရုပ်လေးတွေ ခေါက်တတ်အောင် သင်ပေးလို့ ရပါပြီ။
လွယ်လွယ်ကူကူ ခေါက်လို့ ရမယ့် အရုပ်လေးတွေကနေ စသင်ပေးတာက သားသားမီးမီးတို့ကို စိတ်အား ထက်သန်စေမှာ ဖြစ်သလို ပျော်လည်း ပျော်စေမှာပါ။ အရောင်စုံ စက္ကူလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး ခေါက်ခိုင်းရင်း အရောင်လေးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးလို့ ရသလို တိရစ္ဆာန် အရုပ်လေးတွေ ခေါက်ရင်း အကောင်လေးတွေရဲ့ နာမည်လေးတွေကိုပါ မိတ်ဆက်ပေးခွင့် ရမှာပါ။
သားသားမီးမီးတို့ကို စက္ကူရုပ်လေးတွေ ခေါက်ဖို့ အားပေးပါလို့ ပြောရတာက အခုလို အကြောင်းအရင်းလေးတွေကြောင့်ပါ။
သားသားမီးမီးတို့ကို အရုပ်ခေါက် သင်ပေးတဲ့အခါ မေမေ ဒါမှမဟုတ် ဆရာမတွေက ခေါက်နည်းကို တစ်ဆင့်ချင်း ပြောပြပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြောပြပေးခြင်းဖြင့် ကလေးတွေက ပြောပြတာတွေ၊ သင်ပေးတာတွေကို လိုက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိကို ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရုပ် လှလှလေး ရအောင် စိတ်ပါဝင်စားစွာ လိုက်လုပ်ရင်းက အာရုံစိုက် လုပ်တတ်တဲ့ အလေ့အထကို ရရှိမှာဖြစ်သလို တစ်ဆင့်ချင်းစီကို လိုက်လုပ်ရင်း အောင်မြင်သွားတဲ့အခါ သူ့ကိုယ်သူလည်း ယုံကြည်မှု ရသွားမှာပါ။
အတူတကွ သင်ယူတတ်တဲ့ အလေ့အထ ရသွားမယ်
သားသားမီးမီးတို့ဟာ အသက် ၅ နှစ်ရောက်တဲ့အခါ အခြား သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ သင်ယူမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ရတော့မှာပါ။ ဒီလို သင်ယူမှုတွေကို လုပ်တဲ့အခါ တစ်ကိုယ်ရေ စွမ်းဆောင်မှု ကောင်းဖို့ လိုသလို အသင်းအဖွဲ့လိုက် လုပ်ဆောင်တတ်မှုလည်း ကောင်းဖို့ လိုပါမယ်။
အရုပ်ခေါက်တဲ့ အလေ့အကျင့်က တစ်ယောက်တည်း လုပ်ဆောင်ရတာ မဟုတ်ဘဲ အနည်းဆုံး သင်ပေးတဲ့သူရယ် သားသားမီးမီးတို့ရယ် လုပ်ဆောင်ရတာ ဖြစ်တာကြောင့် အတူတကွ သင်ယူတတ်တဲ့ အလေ့အထကို အကျင့်ရပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ။
အရုပ် ခေါက်တဲ့အခါ တစ်ဝက်ချိုးချမယ်။ ၃ ချိုး တစ်ချိုးစာလောက် ချိုးချမယ်။ စတုရန်း ကျကျလေး ချိုးမယ် စတဲ့ အတိုင်းအတာ ပြောဆိုမှုတွေကြောင့် ကလေးက အတိုင်းအတာ အတွက်အချက်တွေကို ကျွမ်းကျင်လာမှာပါ။
တီထွင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ကောင်းလာမယ်
အရုပ်လေးတွေ ခေါက်ပေးရင်းကနေ ရရှိလာမယ့် နောက်ထပ် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ရပ်ကတော့ သားသားမီးမီးတို့ကို တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း တိုးတက်လာစေမှာပါ။
ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ကောင်းလာမယ်
အရုပ် ခေါက်တဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေသလို အရုပ်လေး လှလှပပ ဖြစ်စေဖို့ လိုအပ်ချက် မရှိအောင် အသေးစိတ် ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ဆောင်တတ်မှုက အသေးစိတ်ကအစ အတိအကျ လုပ်တတ်လာစေနိုင်သလို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ပြဿနာအခက်အခဲ မှန်သမျှကို ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ အလေ့အထလေး ရလာစေမှာပါ။
စက္ကူလေးတွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ၊ ခေါက်ချိုးတဲ့အခါ လက်ချောင်းအားကို အသုံးပြုရတဲ့အတွက် လက်ချောင်းအားတွေ၊ ဆုပ်ကိုင်တာတွေ တိုးတက်လာပါတယ်။
ကဲ ……. သားသားမီးမီးတို့ကို အပျင်းပြေအောင် အရုပ်လေးတွေ ခေါက်ခိုင်းရင်း အခုလို အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရရှိအောင် ဖန်တီးပေးလိုက်စို့လား မေမေတို့ရေ …….
7 Stunning Benefits Of Origami to Your Child https://www.koolstories.com/blog/benefits-of-origami-for-children Accessed Date 1 November 2021
5 reasons why Origami is good for your Child. https://pepplay.in/why-is-origami-good-for-your-child/ Accessed Date 1 November 2021